Dhismaha warshadaha Iibka iyo Ijaarka gudaha Reading, Berkshire
Dhismaha warshadaha gudaha Reading
Dhismaha warshadaha gudaha Berkshire
Waxa daabacay Sharps Commercial
Waxa daabacay Hurst Warne Partners
Waxa daabacay Quintons
Waxa daabacay Haslams Commercial
Waxa daabacay Brunsden Associates
Berkshire (dhagayso) BARK-shər, -⁠sheer; qarnigii 17-aad mararka qaar waxaa loo higaadiyay cod ahaan sida Barkeshire; oo loo soo gaabiyo Berks.) Waa degmo ku taal Koonfur Bari England. Mid ka mid ah gobollada guryaha, Berkshire waxay u aqoonsan tahay Boqortooyada Magaalada Berkshire 1957 sababta oo ah joogitaanka Windsor Castle, iyo waraaqaha lahaanshaha ayaa la soo saaray 1974. Berkshire waa degmo asal taariikhi ah, degmo xaflad ah iyo mid aan ahayn - magaalo-magaalo oo aan lahayn gole gobol. Magaalada gobolka waa Akhris. Webiga Thames wuxuu sameeyay soohdin taariikhi ah waqooyiga, laga bilaabo Buscot galbeedka ilaa Old Windsor oo bari ah. Gobolka taariikhiga ah ayaa markaa ku jira dhul ay hadda maamusho Vale of White Horse iyo qaybo ka mid ah South Oxfordshire ee Oxfordshire, laakiin waxay reebtaa Caversham, Slough iyo shan degsiimooyin ka yar dadka ku nool bariga Royal Royal ee Windsor iyo Maidenhead. Dhammaan isbeddelada la soo sheegay, marka laga reebo isbeddelka Caversham, wuxuu dhacay 1974. Magaalooyinka Abingdon, Didcot, Faringdon, Wallingford iyo Wantage waxaa loo wareejiyay Oxfordshire, lixda meelood ee ku soo biirey waxay ka yimaadeen Buckinghamshire. Golaha Deegaanka Berkshire wuxuu ahaa dawlada hoose ee ugu weyn aaggaga 1889 ilaa 1998 wuxuuna kudhisanaa Akhriska, magaalada gobolka oo leh maamul degmo u gaar ah (1888-1974). Laga soo bilaabo 1998, Berkshire waxaa xukumay lixda maamul ee midowga Bracknell Forest, Reading, Slough, West Berkshire, Windsor iyo Maidenhead iyo Wokingham. Degmooyinka dhaqanku waxay xuduuda ka yihiin Oxfordshire (dhanka woqooyi), Buckinghamshire (dhanka waqooyi-bari), Greater London (dhinaca bari), Surrey (dhanka koonfur-bari), Wiltshire (dhinaca galbeed) iyo Hampshire (dhanka koonfureed) . Qayb ka mid ah gobolka kama jirto wax ka badan 8.5 mayl (13.7 km) oo ka mid ah wadada weyn ee M4.